Xog cusub: Qaraxa ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb, waa kuma ninka ku dhintay? | Baahin Media
Faah faahin dheeri ah ayaa waxay ka soo baxeysaa qaraxii saakay ka dhacay maqaaxida ku taala Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug, taa oo sababtay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba isugu jira.
Maqaaxida la bartilmaameydsay waxay ka soo horjeeday Xarunta Inji oo lagu diiwaangeliyo Ciidamada Ahlu Sunna Wal Jameeca, ee dagaalka kula jira maleeshiyada Ururka Al Shabaab.
Qoraal ay Galmudug soo saartay ayay ku sheegtay in qaraxaasi uu ahaa miino horey loogu sii aasay maqaaxida, oo aanu ahayn qarax ismiidaamin ah.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Qaraxa ka dhacay Dhuusamareeb maaha ismiidaamin, mana jirto cid is qarxisay. Waxa ay dhacdadu ahayd miino horey loogu aasay maqaaxidan, oo ku taala ka soo horjeedka Xarunta Inji.”
“Miinada qaraxday waxaa ku dhintay askari ka tirsan Ciidanka Galmudug, waxaana ku dhaawacmay shan qof, kuwaa oo afar ka mida ay yihiin hooyada maqaaxida laheyd, saddex carruur ah oo ay dhashay iyo qof kale oo maqaaxida ka shaahaayay.”
“Allaha u naxariisto askariga ku geeriyooday qaraxa uu cadowgu ku aasay maqaaxida waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Tiriig.”
“Jugta labaad ee laga maqlay Magaalada Dhuusamareeb ayaa iyaduna ahayd miino ay ciidamada amnigu qarxiyeen, taa oo lagu aasay goob waddo ah.”
Si kastaba ha-ahaatee qaraxan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay oo ka dhaca Magaalada Dhuusamareeb, tan iyo markii Ciidamada Dowladda Somaliya lagu wareejiyay amiga magaaladaasi.